5 ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးစျေးဝယ်ထွက်ပေါက်၏ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးစျေးဝယ်ထွက်ပေါက်၏
ပြည်ပမှာခရီးသွားလာသည့်အခါ, ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်အဘို့အစျေးဝယ်သွားဖို့အခွင့်အလမ်းကိုချစ်၏, မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများ! ဒါဟာအခြားတိုင်းပြည်များတွင်ကွဲပြားခြားနားခံစားရ, ကမ? အခါဥရောပမှကြွလာ, စျေးဝယ်စိတ်ပျက်ပါဘူး. မသာပါကထိုကဲ့သို့သောလန်ဒန်နဲ့မီလန်အဖြစ်ကျော်ကြားစျေးဝယ်မြို့ကြီးများရှိပါဘူး, ၎င်းမှာ high-end ဇိမ်ခံကားအမှတ်တံဆိပ်များကိုလမ်းပေါ်တွင်ကြီးမားသောအထူးလျှော့စျေးများပေးသည့်ထွက်ပေါက်ကုန်တိုက်များပင်ရှိသည်. ကျနော်တို့အသေးစိတ်အောက်တွင်5ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးစျေးဝယ်ထွက်ပေါက်၏.
အမျိုးသမီးများ, သငျသညျစားသုံးရန်သင့်အထီးခရီးသွားလာအပေါင်းအဘော်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့နည်းနည်းနွဲ့ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်စေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်လျှော့စျေးနှုန်းများမှာဒီဇိုင်နာတံဆိပ်များ၏ဂတိနှင့်အတူ, ဒါဟာကျိန်းသေကြိုးစားရကျိုးနပ်ဖြစ်ပါသည်. ထိုအ hubby သို့မဟုတ်ရည်းစားယုံကြည်တယ်မဟုတ်ပါလျှင်, အဆိုပါထွက်ပေါက်ကျေးရွာများတွင်နေအိမ်၏ပဒေသာမှဖြစ်ကြသည် ကော်ဖီဆိုင်များ သငျသညျ drop မှီတိုငျအောငျသငျသညျစျေးဝယ်နေတုန်းသူတို့ကသာယာလှပတဲ့လူတွေကိုထိုင်ကြည့်ရှုနိုင်မည့်!
Barberino ဒီဇိုင်နာစက်ရုံပြင်ပ, အီတလီ
အဆိုပါစက်ရုံပြင်ပအကြောင်းကိုတည်ရှိသည် 30 ကနေကီလိုမီတာ Florence နဲ့အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် နာရီဝက်အတွင်းရထားသို့မဟုတ်ကားတစ်စီးဖြင့်သို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားအားဖြင့်. အဆိုပါ Barberino ဒီဇိုင်နာစက်ရုံပြင်ပတစ်ဦးစျေးဝယ်ရွာဖြစ်ပါသည်: တစ်မြို့ဆင်ခြေဖုံးဧရိယာ၌တည်ရှိသည်, ဒါကြောင့်အများအပြားနှင့်အတူငယ်လေးတစ်မြို့တူ “အိမ်များ” အဆိုပါဆိုင်များအိပ်ကြောင်းနားမှာခြမ်း. အဆိုပါ Barberino ဒီဇိုင်နာစက်ရုံပြင်ပကဲ့သို့ထွက်ပေါက်၏အားသာချက်များများထဲတွင်ခြောတစ်ကန့်သတ်ဧရိယာထဲမှာအဓိကအမှတ်တံဆိပ်၏စတိုးဆိုင်၏မြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်ပြီး.
သငျသညျကဲ့သို့သောအီတလီနှင့်နိုင်ငံတကာနာမည်ကျော်အမှတ်တံဆိပ်ကိုတွေ့လိမ့်မည် Prada, Dolce & Gabbana, Cavalli, Patrizia Pepe, မိုက်ကယ် Kors, Pinko, Furla, but many international ones such as ခန့်မှန်း, အမွှာသတ်မှတ်မည်, မညီညာသော, Hugo Boss, Nike က, နှင့် Adidas, to nameafew among the best known. သငျသညျပျောက်ရနှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဆုံးရှုံးဖို့ကြောက်လန့်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, အဆိုပါကုန်တိုက်၏ဗဟိုသို့လမ်းလျှောက်သင်တစ်ဦးအခမဲ့တှေ့လိမျ့မညျ, အဆိုပါစက်ရုံပြင်ပ၏အသေးစိတ်မြေပုံကို.
ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဥရောပ၌အကြှနျုပျတို့၏အကောင်းဆုံးစျေးဝယ်ဆိုင်များတွင်ဤထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ? အဆိုပါစတိုးဆိုင်ကတိပေး ၏အထူးလျှော့စျေး 30 သို့ 70% အတွင်းအရောင်းရဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ သာမန်စျေးဆိုင်နဲ့မကြာခဏကိုပိုမိုအထူးပရိုမိုးရှင်းရှိပါတယ်! သငျသညျကြီးတွေအမှတ်တံဆိပ်ကိုချစ်လျှင်, သင်ရုံသာအချို့သောကြီးမြတ်အပေးအယူရှာတွေ့၏အန္တရာယ်ကို run, ကြောင်းစားဆင်ယင်သို့မဟုတ်အိတ်ဖမ်းဆုပ်, သို့မဟုတ်မြို့စတိုးဆိုင်၌သင်ပိုမိုမြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်သင်မြင်ဖူးသောဖိနပ်တစ်ရံ.
Bicester ကျေးရွာ, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
Bicester ကျေးရွာ ကလျှော့ဒီဇိုင်နာစျေးဝယ်မှကြွလာသောအခါသင်တို့အဘို့ရှာကြသည်အရာအားလုံးကိုရှိပါတယ်. ဒါကြောင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်ထိပ်ဇိမ်ခံလက်လီခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်အဖြစ်ကျနော်တို့ဥရောပစာရင်းထဲတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးစျေးဝယ်ဆိုင်များတွင်မှ Bicester ဆက်ပြောသည်ပါပြီ. ဒါဟာလူကြိုက်အများဆုံးတို့တွင် ခရီးသွားဧည့်နေရာများ နိုင်ငံခြားသားများအဘို့အင်္ဂလန်မှာ, ဘာကင်ဟမ်နန်းတော်နှင့်လန်ဒန်၏မျှော်စင်နှင့်အတူ.
ဒါဟာခရီးသွားဧည့်များအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်, သော်လည်း. ဖက်ရှင်အယ်ဒီတာများနှင့်သတင်းထောက်များပုံမှန်ဧည့်သည်များဖြစ်ကြပြီးဒါကိတ် Middleton ဖြစ်ပါသည်, ကိန်းဘရစ် Duchess. သူမသည်တစ်ချိန်ကမင်းသားဂျော့ခ်ျများအတွက်ညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီပွဝယ်ယူပြောက်ခဲ့သည်. သင်တစ်ဦးတော်ဝင်တစ်ခုသို့မဟုတ် Vogue အယ်ဒီတာရှိမရှိ, သူတစ်ဦး bargain ကြိုက်နှစ်သက်မပါဘူး?
la Vallee ကျေးရွာ, Serris, ပြင်သစ်
ပဲရစ်မြို့အနီး, La Vallee ကျေးရွာမှာ Open-ဝေဟင် setting ကိုတစ်မူထူးခြားတဲ့စျေးဝယ်အတွေ့အကြုံကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ. ထက်ပိုပြီးရှိပါတယ် 110 ဖက်ရှင်ဆိုင်များ ကမ္ဘာကျော်နိုင်ငံတကာဖက်ရှင်၏. လျှော့စျေးနှုန်းများမှာ၎င်းတို့၏ယခင်ရာသီစုဆောင်းခြင်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့လူနေမှုပုံစံစတဲ့အမှတ်တံဆိပ်လည်းရှိပါတယ်, အားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံး.
la Vallee ကျေးရွာဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးစျေးဝယ်ဆိုင်များတွင်တစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါဟာဧည့်သည်များအထဲကတစ်ဦးမမေ့နိုင်သောနေ့ရက်ကိုပျော်မွေ့စေရန်ဂုဏ်သိက္ခာအမှတ်တံဆိပ်မှနေရာဖြစ်သည်များနှင့်ဂရုတစိုက်တာဝန်ယူထားသောန်ဆောင်မှုတစ်ခုရွေးချယ်ရေးကမ်းလှမ်း.
ကျေးရွာသည်အိမ်ဖြစ်သည် ထက်ပိုမိုရန် 110 အပါအဝင်အထင်ကရအမှတ်တံဆိပ်၏အထူးစပါယ်ရှယ်ဝန်ဆောင်မှု: Armani, ကယ်လ်ဗင်ကလိန်း, Carven, ချားလ်စ် Tyrwhitt, CH ကာရိုလိုင်းနား Herrera, မီးရထားတှဲ, Diane ဗွန် Furstenberg, Fred သည်ပယ်ရီ, Furla, ခန့်မှန်း, Hackett, ဂျင်မီ Choo, Kenzo, Longchamp, Marni, မိုက်ကယ် Kors, အာနန္ဒာ, ရှင်ပေါလု & ဂျိုး, ရှင်ပေါလုစမစ်, Poiray, ရောဘတ် Cavalli, Salvatore Ferragamo, S.T. Dupont, Sandro, Superdry, Ted Baker, Tods, Tommy Hilfiger, အဆိုပါ Kooples, Tumi, UGG, Vanessa ဘရူနို, Yves ဆော်လမွန်, Zadig & ဗော်တဲယားနှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောငါတို့ရှိသမျှသည်နာမည်လို့မရပါဘူး.
Serravalle ဒီဇိုင်နာစက်ရုံပြင်ပ, မီလန်မြို့အနီး Serravalle, အီတလီ
ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးစျေးဝယ်ဆိုင်များတွင်၏စာရင်းတစ်ခုမီလန်ထွက်စွန့်ခွာလို့မရဘူး! သင် high-end စျေးဝယ်ရှာနေလျှင်, မီလန်လူအများစု၏စာရင်းထိပ်မှာမကြာခဏဖြစ်ပါတယ်. သင်လည်းသင့်ရဲ့ branded စျေးဝယ်အပေါ်လျှော့စျေးများရနိုင်သိပါသလား? ကြီးမားသောနှင့်မြင့်မားသောလမ်းဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်အထူးလျှော့စျေးများအတွက် Serravalle ဒီဇိုင်နာစက်ရုံပြင်ပသွားရောက်ကြည့်ရှု.
အဆိုပါ Gavi တောင်ကုန်း၏စိတ်နှလုံးထဲမှာတည်ရှိပါတယ်. ဒါဟာနေ့စဉ်လွန်းဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်ချိတ်ဆက် မီလန်ကနေ (ခရီးသွားအချိန်ခန့်. 50 မိနစ်များ). Serravalle ဒီဇိုင်နာစက်ရုံပြင်ပပုဖြစ်ပါသည် largest outlet in Europe ဇိမ်ခံစျေးဝယ်လောကီသားတို့သည်အထံအပ်နှံ. ထဲမှာ, ဖြည့်စွက်ကာ 11 အရသာ၏ခရီးစဉ်. ဒါဟာပါဝင်သည် ကဖေးနှင့်စားသောက်ဆိုင်. စျေးဝယ်ချစ်သူများတှေ့လိမျ့မညျ ထက်ပိုပြီး 230 စတိုးဆိုင်များ. အကောင်းဆုံးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပြည့်စုံအားလုံး, Casadei အပါအဝင်ပေါင်းကြီးတွေအမည်ဖြင့်အီတလီဒီဇိုင်နာတံဆိပ်များ, ရေခဲတောင်, နှင့် Missoni.
Wertheimer ကျေးရွာ, Wurzburg, ဂျာမနီ
Wurzburg တစ်ဦးအလည်အပတ်ခံစားကြည့်ပါ, အသက်အကြီးဆုံးဂျာမန်မြို့ကြီးများနှင့်တစ်ဦး၏တဦးတည်း ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် site ကို. ယင်း၏ Explore သမိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်များ နှင့်အထိမ်းအမှတထို့နောက် Wertheimer ကျေးရွာစက်ရုံပြင်ပဈေးဝယ်ခရိုင်မှာအကောင်းဆုံးလျှော့စျေးများဖမ်း. Wurzburg ၌ဤထွက်ပေါက်စျေးဝယ်ရွာကြီးမားတဲ့ဂုဏ်ယူ 110 ဒေသခံနှင့်နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်! အဆိုပါရွာပဲဖြစ်ပါတယ် 50 Frankfurt သို့မဟုတ်ကနေမိနစ် 60 Nuremberg ကနေမိနစ်. သင်သည်သင်၏စျေးဝယ်များအတွက်လောင်စာကိုစောင့်ရှောက်ရန်အများအပြားကစားသောက်ဆိုင်တွေမှာလည်းရှိပါတယ်!
အရည်အသွေးမြင့်ဥရောပဒီဇိုင်နာဖက်ရှင် Get, ပရိဘောဂ, သို့မဟုတ်အိမ်သုံးပစ္စည်းများ 30% သို့ 60% နည်းသော. သူတို့ရဲ့ပိုလျှံကိုမီးရှို့ဒီဇိုင်နာများနှင့်ရာသီအလိုက်စားကြွင်းစားကျန်များလက်ထက်၌ရှည်လျားသွားပြီဖြစ်ကြောင်း. စက်ရုံထွက်ပေါက်စတိုးဆိုင်များယခုလေ့ယင်းအကြား strewn နေကြတယ် ပါ အသေးစားနှင့်အလတ်စားမြို့ကြီးများ. အဖြစ်န်းကျင် မြို့ပြစင်တာများ နှင့်, သင်သိရှိသမျှအဘို့, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘေးမှာတံခါးကို! ပျော်ပွဲစားထွက်ခြင်း နှင့်အသစ်တစ်ခုကိုပိုက်ဆံအိတ်မည်သူမဆို?
Wurzburg ရထားမှ Frankfurt
Nuremberg Wurzburg မှရထား
Wurzburg ရထားမှ Bonn
တစ်သက်တာ၏စျေးဝယ်ခရီးစဉ်များအတွက်မီးရထားပေါ်တွင်သင်၏ခုန်ရဖို့အဆင်သင့်? ယုံကြည်ကိုးစားပါ တစ်ဦးကရထား Save သင်တစ်ဦးလက်မှတ်ရဖို့ရှိအစာရှောင်ခြင်းနှင့်မဆိုဝှက်ထားသောအဖိုးအခမပါဘဲ. (စျေးဝယ်ပိုပိုက်ဆံ!)
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးစျေးဝယ်ထွက်ပေါက်၏” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-shopping-outlets-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#designerbrands #ဖက်ရှင် #outlets စျေးဝယ်